Guddiga Doorashooyinka Koofur Galbeed Oo Burburay Kadib Markii Ay Iscasileen Ugu Yaraan 15 Xubin Oo Ka Mid Ah – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka Koofur Galbeed Oo Burburay Kadib Markii Ay Iscasileen Ugu Yaraan 15 Xubin Oo Ka Mid Ah
November 5, 2018 November 6, 2018 Kalfadhi
Ugu Yaraan 15 Xubnood, oo ay ku jiraan Guddoomiyaha, Kuxigeenkiisa, Xoghayaha iyo Afhayeenka, ayaa maanta iska casishay Guddiga Doorashooyinka Koofur Galbeed. Iscasillaaddooda waxay ku saleeyeen fara-gelin ay sheegeen in ay ku hayso Dowladda Federalka Soomaaliya.
Waxay dhamaantood si mideysan cod dheer ugu sheegin, iyagoo isticmaalaya Warbaahinta, iney ka shaqeyn waayeen Dowladda Federalka ah, iyagoo ku eedeynaya in ay Muqdisho u kaxaysay Xildhibaanadii Dowlad Goboleedkaas. “Anigoo la i yiraa Xildhibaan Carfa Ibraahin Aadan waxaan iska casilay xilkii Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka iyo kii xubinnimada Guddiga” ayuu Xildhibaan Carfa ka hor yiri suxufiyiinta magaalada Baydhabo.
“Waxaan aragnay, oo muuqatay, oo aan cidna laga qarineyn in Baarlamaankii codka laga rabay la kaxaystay, oo diyaarad lagu daabulay, oo Xamar la geeyey, saasdaraadeed, markaan aragnay ineysan doorashadu qabsoomeyn, oo ay carqalad meesha ka jirto, Baarlamaankiina aan lahayn, ka Ibraahin ahaan, waxaan go’aansaday inaan ka tanaasulo xubintii aan ka ahaa Guddiga” ayuu yiri Xildhibaan Ibraahin Macalin Aadan, oo ka ahaa xubin Guddigaas.
Xildhibaan Ammiin Maxamed Faarax, oo ah Afhayeenka Guddiga Doorashada K/Galbeed, ayaa sheegay in sababta ay isku casileen aysan jirin wax labeeya iney astako ka yihiin Dowladda Federalka ah oo uu, si la mid ah Xubnihii Guddiga burburay, ku eedeeyey iney Muqdisho isugu geysatay badi Xildhibaanada Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed. “Waxaan aduunka u sheegeynaa in ay Dowladda Federalka ka socon weysay Doorashadii Koofur Galbeed” ayuu yiri Xildhibaan Ammiin, isagoo ku dhawaaqaya inuu iska casilay xubinimadii Guddiga.
Guddiga Doorashooyinka K/Galbeed waxaa maanta uu bilaabay inuu siiyo Shahaadada u ogolaaneysa iney kaga qeyb galaan Doorashada Madaxweynanimo ee Dowlad Goboleedka K/Galbeed musharaxiinta dooneysa xilkaas, waxaana qofkii ugu horeeyey ee ay siiyeen saakay ahaa Mukhtaar Roobow Cali, oo mar soo ahaa Afhayeenka iyo Guddoomiyihii Labaad ee Al-Shabaab.
Eedda uu Guddiga burburay ku ganay Dowladda Federalka ma sahlana, iyaduna illaa iyo hadda kama jawaabin. Hase ahaatee, waxay arrintani imaaneysaa, iyada oo uu Golaha Aqalka Sare shalay muujiyey inuu ka walaacsan yahay fara-gelin uusan sheegin cidda wadda, oo uu tilmaamay in lagu hayo Doorashada Koofur Galbeed, waxayna hadalkooda raaciyeen “DIGNIIN”.
Wasiirka Dastuurka Koofur Galbeed, Cabdullaahi Sh. Xasan, ayaa horay ugu eedeeyey Dowladda Federalka ah iney Baydhabo geysay Gaadiidka aan xabbadda Karin, ciidan, hub iyo lacag uu sheegay in ay uga cabsi qabaan in lagu car-qaladeyn doono Doorashada Koofur Galbeed.
Hindise Sharciyeedka Dhismaha Hay’adda Naafada Qaranka Ayuu Golaha Shacabku Markale Ka Dooday Maanta
Dowlad Goboleedyada Oo Dowladda Uga Digay Iney Dadka Reer Kuunfur Galbeed Ka dhex Abuurto Dagaal Sokeeye
July 26, 2021 July 26, 2021 Hassan Istiila
Doorashadii xildhibaannada Aqalka Sare oo la filayay in ay shalay ka bilaabato xarumaha maamul-gobolleedyada, ayaa waxaa...
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shalay magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood...
July 26, 2021 Hassan Istiila
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka, ayaa ka wadda-hadlay...